Oxygen zinc xabagta zinc
(xoog leh) (xanh trắng) (trung)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta O2 + 2Zn → 2ZnO
Heerkulka: hawada ku gubanaya
Zn waxaa lagu oksijiiyaa oksijiinka
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada O2 + 2Zn → 2ZnO
What are the chemical and physical characteristic of ZnO (zinc)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh ZnO (zinc oxide) alaab ahaan?
2Zn (MAYA3)2 → 4MAYA2 + O2 + 2ZnO
nitrogen dioxide Oxygen xabagta zinc
(kanu đỏ) (xoog leh) (trung)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Zn(MAYA3)2 → 4MAYA2 + O2 + 2ZnO
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Zn(NO3)2 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NO2 (nitrogen dioxide) iyo O2 (oxygen) iyo ZnO (zinc oxide)?
Dhacdo ka dib Zn(NO3)2 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Zn(MAYA3)2 → 4MAYA2 + O2 + 2ZnO